Ikhabethe lokuphumula, ilanga nolwandle eGuayacanes - I-Airbnb
Ikhabethe lokuphumula, ilanga nolwandle eGuayacanes
Playa Juan Dolio, i-Dominican Republic
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Magalys
U-Magalys Ungumbungazi ovelele
Ikhabethe elithokomele kumazinga amabili, elinokufinyelela okuqondile olwandle oluhle lwaseGuayacanes. Uzojabulela ukubuka okungcono kakhulu kolwandle, ukudla kwasekuseni noma usuka ekamelweni lakho. Ngezindawo ezikhanyiswe kahle kanye nomoya omncane wemvelo. Indawo enomoya womndeni, eyenzelwe ukuphumula, ukujabulela ilanga nolwandle, usayizi olinganiselwa ku-50 M2.
Indawo yokuhlala inikezela ngamaleveli amabili enzelwe ukujabulela ukuhlala kuthule, ilanga nolwandle. Izindawo zomphakathi zisezingeni lokuqala kanti amagumbi amabili negumbi lokugezela lisezingeni lesibili.
Inekhishi elihlomele, igumbi lokudlela kanye negumbi lokuphumula, elihlanganisiwe, nomabonakude kanye ne-wi-fi etholakalayo.
Ezingeni lesibili, i-master bedroom ine-balcony enokubukwa okuhle kolwandle kanye ne-air conditioning, womabili amakamelo anabalandeli futhi akhanya kahle ngokwemvelo, amagumbi okugeza amabili agcwele eyodwa ezingeni ngalinye. Amasevisi aku-semi-basement ngezansi kwezitebhisi.
4.94 · 119 okushiwo abanye
Le phrojekthi itholakala edolobheni elincane laseGuayacanes, azikho izikhungo zokuzijabulisa noma izitolo ezinkulu. Kuyimizuzu emihlanu ngemoto ukusuka endaweni yaseJuan Dolio lapho ungathola khona amakhasino, ama-disco, ama-spa, amahhotela nezinye izindawo zokudlela.
I-Guayacanes iyidolobhana elilula nelijabule, elinokuthuthukiswa kwamadolobha okulinganiselwe, imigwaqo egandayiwe, nakuba leyo yokufinyelela okuqondile kuphrojekthi ingekho, kodwa ingahamba.
Uzothola amakhilomitha ogwini olunesihlabathi esimhlophe esikuyisa ezindaweni zokudlela ezijwayelekile. Ungabona ukufika kwabadobi futhi uthenge izinhlanzi zabo ezintsha uma uthanda.
Nginikeza izivakashi zami ukuzimela kodwa ngiyatholakala uma zingidinga.
UMagalys Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Playa Juan Dolio namaphethelo